By vijayafm on	 November 17, 2018 देश, फोटो फिचर, विजय परिवार, विविध खबर, स्थानीय, स्थानीय तह
प्रेम क्षेत्री, मंसिर १, गैंडाकोट ।
नेपालकै सर्वोत्कृष्ट वित्तिय सहकारी संस्था विकू बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको २९ औं साधारण सभा गैंडाकोटमा सम्पन्न भएको छ । विजय सामुदायिक शिक्षा सदनको प्राङ्गढमा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाली कांग्रेशका महामन्त्री एवं प्रतिनिधी सभा सदस्य डा. सशांक कोईरालाले विकूले समाजमा उदाहरणीय काम गरेको बताउनुभयो ।
साधारण सभामा बोल्दै उहाँले राज्यले गर्नुपर्ने भुमिका पनि विकूले निर्वाह गरेर समाजमै उदाहरणीय संस्थाको रुपमा आफुलाई स्थापित गरेको बताउनुभयो । साथै उहाँले देश विकास र समृद्धिमा सहकारीको भुमिकाको खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको सरकार रहेको पालामा सहकारी फस्टाएको उहाँको दावी थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधीसभा सदस्य तिलक महतले नवलपुरबाट २२ अरब आन्तरिक राजश्व संकलन गर्दै राज्यको विकासमा टेवा पु¥याउने जनाउँदै कृर्षीमा आधुनिकीकरण गर्न सकियो भने गण्डकी प्रदेशलाई खान पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारी, औद्योगिक, व्यवसायिक र कृर्षिको क्षेत्रबाट नवलपुरलाई एक नम्बर बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मुटुरोग विशेषज्ञ तथा सामाजिक अभियान्ता डा. भगवान कोईरालाले विकूको हाम्रो लक्ष्य खुसी एवं स्वस्थ सदस्य भन्ने सोचको प्रंशसा गर्दै स्वस्थ रहन व्यायम गर्न जोड दिनुभयो । साथै उहाँले स्वास्थ्य उपचारका लागि बचत गर्न आव्हान गर्नुभयो । उहाँले विकूको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम महत्वपुर्ण रहेको जनाउँदै यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा महिला उद्यमी श्यामवदन श्रेष्ठले बचत गर्दाकोे आफ्नो अनुभव सुनाउँदै जिवन जिउन पनि बचत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसमाथी महिलाले गर्ने बचत अझ वढि प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुने उहाँको दावी थियो ।
नेफ्स्कुनका केन्द्रीय अध्यक्ष डि.बी. बस्नेतले नेपालमा नै विकू एक उदाहरणीय सहकारी रहेको जनाउँदै संस्थाको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्नुभयो । गैंडाकोट क्षेत्रमा रहेका उस्तै प्रकृतिका सहकारी एकिकरण भएको हेर्ने ईच्छा रहेको बताउनुभयो ।
सहकारी अभियान्ता, नेफ्स्कुन एवं एशियाली ऋण महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ऋषीराज घिमिरेले विकूका हरेक कार्यक्रम र गतिविधी प्रंशसा गर्न लायक रहेको बताउनुभयो ।
उत्प्रेरक व्यक्तित्व अभियानकर्मी बासुदेव न्यौपानेले विकूले गरिबि निवारणमा खेलेको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको जनाउँदै समाजमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेफ्स्कुनका सञ्चालक भरतप्रसाद दवाडी, शान्ती न्यौपाने, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख चेसराम आले, उपप्रमुख शारदा विश्वकर्मा, गैंडाकोट नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेल, विजय विकास स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष हरिलाल सापकोटा, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधी, वडाध्यक्ष लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
विकूले साधारणसभाको अवसरमा मिस्ड कल बैंकिड्ड सेवा सुभारम्भ गरेको छ । ९८०२९१५५५० मा मिस्ड कल गर्दा खाताको मौज्दातबारे जानकारी हुन्छ भने ९८०२९१५५५१ मा मिस्ड कल गर्दा रु. १०० को मोवाईल रिचार्ज हुने संंस्थाका प्रमुख अधिकृत माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा गैंडाकोट ३ ढोडेनीमा रहेको मेलमिलाप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग एकिकरण गरेको घोषणा गरिएको थियो । साधारणसभामा हरेक २ वर्षमा प्रदान गरिदैं आएको विकू राष्ट्रिय सहकारिता पुरस्कारबाट ऋषीराज घिमिरेलाई सम्मान गरिएको छ । साधारणसभामा विभिन्न ८ वटा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।
हाम्रो लक्ष्य खुसी एवं स्वस्थ सदस्य भन्ने अभिप्रायका साथ अगाडी बढिरहेको वित्तिय साक्षरता अभियानमा सफलता प्राप्त गर्दै आएको विकूले स्वास्थ्य साक्षरता एवं प्रविधि साक्षरतालाई जोड दिएको विकूका अध्यक्ष केशवप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले कोखदेखी चितासम्म विकू साथी बन्न सक्नेगरि कार्यक्रमहरु ल्याईएको बताउनुभयो ।
प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विकूले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा प्रस्तावित गरिएका ४० वटा वित्तीय तथा ४९ वटा गैर वित्तीय कार्यक्रमहरुमध्ये ९२ प्रतिशत कार्यक्रमहरु सम्पादन भएको विकूका सचिव गोविन्द रिमालले जानकारी दिनुभयो ।
विकूले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा भएको रु. ३६ करोड, ८२ हजार ५ सय ९१ कुल आम्दानीबाट रु. २३ करोड ६९ लाख ११ हजार ९ सय ६२ खर्च गरि रु. १२ करोड ३१ लाख ७० हजार ६ सय ८२ सञ्चालन मुनाफा गर्न सफल भएको विकूका कोषाध्यक्ष कालिदास गौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
विकूले लगातार ४ पटक सम्म एक्सेस ब्रान्ड, फाईभ स्टार अन मिक्स मार्केट, राष्ट्रिय सहकारी संघबाट राष्ट्रिय पुरस्कार, नेफ्स्कुनबाट नेपालको सर्वोत्कृष्ट सहकारी पुरस्कार, उत्कृष्ट करदाता पुरस्कार, रेमिट्यान्स सेवामा उत्कृष्ट पुरस्कार जस्ता कारणले संस्थाको ख्याती अत्यन्त उच्च राखेको लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक टिकाराम कंडेलले बताउनुभयो ।
नेपालकै सहकारी अभियानमा ए.टि.एम. सेवाको सुभारम्भ गर्नु, सदस्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सञ्चालन, सदस्य सर्वेक्षण एवं बहुआयामिक गरिबी मापन, संस्थाको प्रभाव विश्लेषण, वित्तिय साक्षरता सम्बन्धी कक्षाहरु सञ्चालन, स्कूल स्कूलमा विकू, युवासँग विकू, ज्येष्ठ सदस्यहरुका लागि आफ्नै टेक्ने लठ्ठी साहारा स्वरुप उपलब्ध गराउने जस्ता महत्वपूर्ण गतिविधिहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सहकारीको विकासको अभियानमा छुट्टै पहिचान बोकेको विकू बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को स्थापना वि.स. २०४८ भाद्र ५ गते अर्थात आजभन्दा २८ वर्ष अगाडी सामाजिक विकासमा अग्रणी संस्था विजय विकास स्रोत केन्द्र (तत्कालिन विजय युवा क्लब)को विचार, नेतृत्व र परिकल्पना अनुसार २६ जनाले दैनिक ५० पैसा बचत गर्ने कार्यको थालनीले आज करिब साढे ३ अरबको पुँजी संकलन गर्दै ऐतिहासिक फड्को मार्न सफल भएको छ । संस्थामा २०७५ असोज मसान्तसम्म २२ हजार १ सय ३० महिला र २२ हजार ३७ पुरुष गरि ४४ हजार १ सय ६७ जना सेयरसदस्य रहेका छन् । ११ वटा सेवा केन्द्रबाट ३२ स्थानमा भएका कार्यक्रमबाट चयन भएका करिब ४२ सय प्रतिनिधी साधारणसभामा सहभागी थिए ।